Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba » Alikho iqhawe elisale emuva kulolu Suku Lwezokuvakasha Lomhlaba lwango-2021
Ezokuvakasha Ezitholakalayo • Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika • Izindaba Zezinhlangano • Imiklomelo • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Amasiko • Imfundo • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba Ezintsha zaseHawaii • Health News • I-ICTP • Izingxoxo • Izindaba • Abantu • Cindezela Izimemezelo • Ukwakha kabusha • Unomthwalo wemfanelo • Ukusimama Izindaba • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha • Wtn
I-World Tourism Network inezinyanga eziyi-18 kuphela, kodwa abaholi abasha bayavela embonini yezokuvakasha nezokuvakasha emhlabeni jikelele.
Iningi labo likhonjwa njengamaqhawe eqiniso kwezokuvakasha yiWorld Tourism Network - kepha bangobani?
The Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba (WTN) inamalungu emazweni ayi-128 futhi yavela kumkhombandlela we- ukwakha kabusha ingxoxo.Heroes.travel wuhlelo lwamahhala lwemiklomelo nokuqashelwa yi-WTN ehlonipha labo abenze umehluko.
Ngokusho kwe-UNWTO, lolu Suku Lwezokuvakasha Lomhlaba lwango-2021 lumayelana nokubandakanywa kwezokuvakasha. I-WTN iqinisekisa ukuthi lokhu kufaka wonke lawo maqhawe angenamagama.
Amaqhawe angempela yilabo ababengenamabhizinisi phakathi nobhadane futhi basakholelwa embonini yezokuvakasha nezokuvakasha. Leli qembu elingaziwa laklonyeliswa nge- Umklomelo Weqhawe Lwezokuvakasha Elizimele. yiWorld Tourism Network namuhla.
”Amaqhawe angempela asenhliziyweni yami ngaphandle kwemisebenzi izinyanga eziyi-18 futhi asinda.
Noma zingabonakali kanjani - ziphakathi kwethu, kepha kungenzeka zingabi nezwi. Ngifuna ukuthi basilalele, beze ngaphambili, ukuze sibashayele ihlombe ngokusinda nokuqhubeka nokuphila, nokuba yingxenye yomkhakha wethu omkhulu. Usuku Lwezokuvakasha Lomhlaba lwango-2021 belumayelana nokubandakanya bonke abantu, futhi leli qembu kumele lifakwe. ” kusho uMarikar Donato, ongumhleli obambisene nomcimbi woSuku Lwezokuvakasha Lomhlaba weWTN kanye neqhawe lezokuvakasha uqobo.
Ubuye wathi: "Kunezinkulungwane zamaqhawe ezokuvakasha angaziwa."
Umsunguli kanye noSihlalo weWorld Tourism Network wanezela: Ngiyaziqhenya ngoMarikar ngokuqhamuka nomklomelo we-Anonomyous Tourism Hero, owokuqala kulo mhlaba.
Kuyaphuthuma, siyawabona la maqhawe angaziwa. Ther zikhona yonke indawo.
Kwesinye isikhathi siyazi ukuthi angobani la maqhawe. Sinesimo abantu abangafuni ukubizwa njengamaqhawe. Bezwe ukuthi yini akudingeki ukuthi yabelwe umphakathi.
Ngiyajabula ukumemezela, i Inethiwekhi Yezokuvakasha Yomhlaba iyinhlangano yokuqala yezokuvakasha yomhlaba ibona isidingo sokubeka la maqhawe angaziwa phambili.
The umklomelo weqhawe lezokuvakasha elingaziwa ingezwe ngokusemthethweni ku- amaqhawe.uhambo iphothifoliyo.
Umsunguli we-WTN uDkt Peter Tarlow uvumile wathi:
“Ezokuvakasha zakhiwa yizinkulungwane zabantu abazidalela ubudlelwano phakathi kwabantu, amasiko nezizwe.
Lezi zihlabani zezokuvakasha zingamaqhawe akule mboni aletha ukukhanya ezweni eligcwele ubumnyama.
Inhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba ifuna ukwembula la maqhawe ezokuvakasha. Njengoba uDkt. Peter Tarlow, owatholakala ngokubambisana weWorld Tourism Network esho: “ezokuvakasha zingaphezu nje kwemboni, ziyinhlanganisela yezinto ezenzeka ngokomoya, ukuxhumana kwemiphefumulo naleli qiniso lomhlaba.
Amaqhawe ezokuvakasha yilabo abahlanganisa izimiso zokuhle kanye nokuhlanganisa ubuntu bethu nezwe lezokuvakasha ”UTarlow usikhumbuza ukuthi amaqhawe ezokuvakasha amele okuhle kakhulu kithina sonke futhi ukufunda ngalowo nalowo wuhambo oluya ekujuleni kobuciko nokunakekela. ”
UMarikar Donato uyi-Washington DC Tour Guide futhi uyisikhulu eMhlabeni I-Federation of Association of Tourist Guide Association (WFTGA)
Namuhla iWorld Tourism Network ibungaze namaqhawe ayo aziwayo. Wonke amaqhawe amukelwa yi-WTN enze okuthile okungaphezu kwalokho obekulindelekile ngokudlula kubhubhane lwe-COVID-19.
UDkt Taleb Rifai, owayenguNobhala-Jikelele we-UNWTO wamahlandla amabili wamukela amaqhawe ekhaya lakhe eJordani. IQhawe Lezokuvakasha uMary Rhodes, umongameli weGuam Hotel & Restaurant Association uvuke ngo-4 ekuseni ukuhambela lo mcimbi wokusondeza umhlaba wonke namaqhawe kuwo wonke amazwekazi.
UDkt. Walter Mzembi, owayenguNgqongqoshe Wezokuvakasha waseZimbabwe uxwayise ukuthi umhlaba uvaliwe, futhi izinkomba zamazwe amabili zonakalisa indlela abaholi bezokuvakasha abalwa ngayo iminyaka engu-20.
Alain St. Ange, umongameli we Ibhodi Yezokuvakasha yase-Afrika, nowayenguNgqongqoshe Wezokuvakasha waseSeychelles babenomyalezo wobumbano e-Afrika.
U-Aleksandra Gardasevic Slavuljica, umqondisi Wezokuvakasha kulesi sizwe saseBalkan wayeyingxenye ye-WTN kusukela ekuqaleni. Wenziwa iqhawe lezokuvakasha ngeqhaza lakhe ekuhlanganiseni isifunda saseBalkan. Wayesekelwa ngu IQhawe Lezokuvakasha uKlodiana Gorica, uSolwazi ogcwele eNyuvesi yaseTirana, eFakhalthi Yezomnotho, e-Albania.
Yizwa kusuka UDkt Snežana Štetić unakho ubesebenza kwezokuVakasha nakwezemfundo yezokuVakasha iminyaka engaphezu kwengu-40 futhi uyinhloko yeqembu lezintshisekelo kwezemfundo, futhi ehola iBalkan Group ephezulu yeWorld Tourism Network.
UDeepak JoshMina, iqhawe lezokuvakasha elivela eNepal, futhi owayeyi-CEO yeBhodi Yezokuvakasha yaseNepal unikeze impendulo yakhe ngokuvulwa kabusha kwezokuvakasha esifundeni saseHimalaya.
USolwazi Geoffrey Lipman weSunX kanye ne Ukubambisana Kwezulu Nezulu Kwezokuvakasha (ICTP) kukhumbuze umhlaba ngosongo lokuguquka kwesimo sezulu.
IQhawe Lezokuvakasha UMouhamed Faouzou DEME waseSenegal wabelane ngomyalezo wakhe wethemba, ukuzethemba, nokukhuthaza nezwe lezokuvakasha. Futhi uyinxusa le-African Tourism Board, futhi ungumeluleki wezobuchwepheshe kuNgqongqoshe Wezokuvakasha kanye Nezokuthutha Ngezindiza eSenegal.
IQhawe Lezokuvakasha kanye ne-CEO ye Iqembu elilandelayo le-LLC e-Azerbaijan, U-Efsun Ahmadov, Baku, e-Azerbaijan uzizwe engcono ngemuva kwesimo esingesihle se-COVID.
Iqhawe lezokuvakasha UDiana McIntyre-Pike unikeze ukubuyekeza ngokusebenzisana kwakhe okusha neqhawe lezokuvakasha u-Edmund Bartlett, ungqongqoshe wezokuvakasha eJamaica. UDiana uyiqhawe lezokuvakasha futhi ungumholi kwezokuvakasha komphakathi eJamaica.
Amaka Amatokwu-Ndekwu, Lagos, Nigeria ungomunye wabasunguli be-African Association of Women In Tourism and Hospitality esanda kusungulwa eNigeria. Uhlala bobabili e-United States naseNigeria.
IQhawe Lezokuvakasha uJoseph Kafunda unguSihlalo we-Emerging Tourism Enterprise Association futhi uyilungu leWorld Tourism Network ezinze eNamibia. Ujoyine esuka eBotswana.
UDkt Peter Tarlow, ongumsunguli weWorld Tourism Network uqedele lo mcimbi ngomkhuleko wezenkolo eziningi.
Akukhokhiswa mali ukuphakamisa noma ukwamukela ukuqashelwa kwamaQhawe yiNhlangano Yezokuvakasha Yomhlaba. Kuthatha ubuncane bokuphakanyiswa okuzimele okungabhekwa kulo mklomelo. Imininingwane engaphezulu ku- www., engabe.co.uk